Kwimbini yokungcatsha komntu - oku kuyinto eqhelekileyo. Njengomphumo wophando lwezenhlalakahle, kwacaca ukuba amadoda amaninzi avumela ukuba baninzi ngakumbi kwabasetyhini, ngaphandle koko, amadoda akholelwa ukuba bonke bayabancedisa ukuziphatha okuvumelekileyo kwindoda kunye nokuthintela abafazi. Indoda eyatshintshile into ayithandayo kulula ukubala. Ukude uxhumano lusehlangothini, kulula kakhulu ukuyiveza. Cinga ngeendlela eziqhelekileyo zokuziphatha kwamadoda emva kobugwenxa. Okokuqala, uqala ukuchitha ixesha elincinci kunye nani kunokuqhelekileyo. Ngokuqhelekileyo ukulibaziseka emsebenzini, kukho iintlanganiso rhoqo kwaye ngokukhawuleza, ukubuyela ekhaya ngokuphindaphindiweyo kushiya ifowuni yeselula. Ukuguquka kwekhadi kwiCartinally, ukuguqula iinwele, izambatho, mhlawumbi ukuvela kwegama elithi "isitayela", ukuba ngaphambi kokungafuni ukuva ngako.
Ukuziphatha komntu emva kokungcatsha
Kukho umdla kwimidlalo, ayifumanwanga ukuhamba rhoqo kwi-gym. Isihlalo seemoto singatshintshwa kwisimo esingenakuthelekiswa kuwe. Isikhundla se-backrest sikhululekile njengokuba kumhlobo omtsha wakho omthandayo. Kwiintsapho ezinemali eyingenelo, kubakho umonakalo xa indoda iqala ukuchitha imali encinci kwintsapho kunokuba isetyenziswe. Kucacile ukuba isizathu asikho kwizoqoqosho ezibonakalayo, kodwa iindleko kunye nezinto ezithandwayo zingenakuqikelela. Ubomi obusondeleyo bunokuba lunqabile. Ukungaphumeleli yinto yokuqala yothando, inzondelelo enye yezizathu eziphambili. Ukubonakala kokuxhalaba kwintsapho ebusondeleyo, njengento eqhelekileyo yokuziphatha komntu emva kokungcatsha. Ingqiqo yecala ithetha ngokwazo - ngokukhungatheka nokungalingani. Ukuziphatha kufana nomntu okhuselayo. Enye yobungqina ifowuni. Ukuba ngaphambi kokuba ifowuni yeselula ihambe kuyo naphi na, ngoku uyayicima okanye ayithwale nayo yonke ixesha. Iiphasiwedi zeebhokisi zeposi kunye nezinye iinkqubo zitshintsha. Uhlobo ngokwalo lubekwe ulwahlulo kwisenzo sokuziphatha ngokwesini phakathi kwendoda nomfazi. Amadoda enobunzima kunye nokuzisola angakwazi ukubopha inombolo kwicala, mhlawumbi akukho nanye. Ukuhlambalaza umntu kumalunga nomoya, ukuziphatha okungenakuvakalelwa. Kwabesilisa abatshatileyo, isondo kunye nothando zihlala zihluke. Ngowesifazane, ngakwelinye icala, uye ekungcatshisweni kothando. Ngakolunye uhlangothi, umfazi, ngokucinga, mhlawumbi emva kokuxoxa nomhlobo wakhe, udibanisa kwicala.
Ngoko ke, imizekelo yokuziphatha kwamadoda emva kokuhlaselwa ingabalwa kwizinto ezilandelayo: - Emva kokungcatsha, abanye abantu babuya, naphi na apho baya khona, abafana boomantang. Kule meko, yonke imigaqo, ekubuyiseni kwamadoda alahlekileyo, kufuneka ibhaliwe ngokungqongqo yowesifazane.
- Abanye bayifumana ngokukhawuleza ukutshintshwa, ngokoqobo ngolunye usuku olulandelayo - balungele ukubhiyozela ukunqoba okusha. Ngaloo nto, musa ukukhawuleza ukuxhoma iilebula ngokwakho "Ndiyingozi ngaphezu kwendlovukazi" kwaye ndiwela kwingcinezelo engacatshulwayo.
- Olunye uhlobo, ngamadoda, enza amahemuhemu. Kubalulekile emva kokuphuka kwakho ukuzilungisa ngokwakho okokuba kutheni iziganeko zeentlobo ezahlukeneyo ziya. Unokucetyiswa kuphela ukunciphisa kwaye uqale ukuhlala.
- enye yezona zihlobo ezintle kunazo zonke zamadoda, zibonakalisa ukuziphatha okuzolileyo emva kokuhlukana
- Abahlobo abahlukileyo ngokuqonda ngokupheleleyo ilizwi. Awuzange ube yindoda yakho, kodwa kwakukho umhlobo wenene onokuxhasa kwaye ancede nanini na
abantu abangaqhelekanga - le nto xa, emva kokuhlukana, uyaqonda ukuba akukho nto enokuyenza ngayo le ndoda, ubuncinci bezonxibelelwano kwaye uziphatha njengokungathi wayengazi kakuhle nawe kwaye wawungekho nto uyenzayo. Ezi ziimpawu zentsingiselo kunye nokuziphatha, kodwa imeko nganye iyingqayizivele kwindlela yayo kwaye sinqwenela kuwe nawuphi na umzekelo ukuba uhlale yindoda kuphela enobumba obuninzi kwaye ufunde ukuxolela okubonakala ngathi yizinto ezingenangqiqo.
Andikwazi ukuxolela ukungcatsha, indlela yokuphila?
Ungaphila ukuthengwa kwaye ulondoloze intsapho?
Kutheni umfazi ekhohlisa indoda yakhe?
Iingxaki zemetaboliki: izizathu kunye neempawu
Ukudibanisa ngokusemthethweni: izizathu, ukuxilongwa, iindlela zendabuko kunye neendlela zonyango
Kulula kangakanani ukuvuka ekuseni kakhulu ebusika
Iimlekyuli zobuhle: ukhilimu ebusuku I-Lancôme Visionnaire Nuit Beauty Sleep Perfector
Indlela yokulahla imibimbi phantsi kwamehlo?
Ukujongana ne-lactic acid
I-ani pie kunye netsard kunye nefennel
Iimpembelelo ezingalunganga zejoyi zokuhle
Bach inkwenkwezi uAla Berger etshata
IHoroscope yowesifazane-iLibra ngo-Agasti 2016